कमला नदी दोहनमा : मेयरको टिपर, वडाध्यक्षको एक्साभेटर ! spacekhabar
कमला नदी दोहनमा : मेयरको टिपर, वडाध्यक्षको एक्साभेटर !
स्पेसखबर सिरहा, ३० जेठ
यो नदीमा पहिलो पटक एक्साभेटरले नदीजन्य पदार्थ खनेको देख्ने प्रशस्त छन्। त्यसैमध्येका एक हुन् दोरिक पासवान। उनी भन्छन्, ‘प्रहरी, प्रशासन र जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन तीव्र बनेको छ। मान्छेले निश्चिम परिणाममा गिटी बालुवा निकाल्नुपर्नेमा नदीको बीचभागमा डोजर पु‍¥याएर दिनरात अनियन्त्रित दोहन भइरहेको छ।’ सरकारी मिलेमतोमा मात्रै यसरी दोहन सम्भव हुने उनले बताए। एक्साभेटर लगाएर नदी खन्न थालिएपछि किनाराका किनाराका बस्ती र जलचरसमेत संकटमा परेका छन्। नागरिक दैनिकमा खबर छ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ ३०, २०७६, ०६:५१:००